विचित्र संसार Archives - सबैको समाचार
स्याउको तौल बराबरको शिशू जन्मिएपछि…
अमेरीकाको एक अस्पतालमा २ सय ४५ ग्रामका शिशू जन्मिएका छन् । शिशूको नाम उनका अभिभावकले सेबी राखेका छन् । शिशू जन्मदा उनको तौल एउटा स्याउको तौल बराबरको भएकाले शिशूका बाबुआमाले नाम नै सेबी राखेका हुन् । डिसेम्बर २०१८ मा जन्मिएका उनी २३ हप्ता तीन दिनमा जन्मिएका हुन् । कम तौल भएका कारण चिकित्सकहरुले जन्मिएको केही […]
विमान र गाडी नचल्दा पेट्रोलियम पदार्थ छेलोखेलो !
चैत, २१, काठमाडौं । लकडानका कारण लामो समयसम्म मोटर तथा हवाई यातायात ठप्प भएपछि १७ सय ट्याकंर, १४ सय पेट्रोल पम्प र निगमका सबै भण्डारण केन्द्रहरु इन्धनले भरिएका छन् । देशभर रहेका सबै केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय भण्डारण केन्द्र, सबै पेट्रोल पम्प र ९५ प्रतिशत ट्याकंरमा डिलेज, पेट्रोल, हवाई इन्धन भण्डारण भइसकेको नेपाल आयल निगमका कार्यकारी […]
काठमाडौंमा आशा भोस्ले
काठमाडौँ, पुस , १० , साधना कला केन्द्र पुतलीसडकको निमन्त्रणामा भारतकी प्रसिद्ध गायिका आशा भोस्ले बुधबार साँझ नेपाल आएकी छन्। त्रिभुवन विमानस्थलमा झाँकीसहित उनको स्वागत गरियो। भोस्लेको स्वागतका लागि यहाँका केही वरिष्ठ कलाकार पनि विमानस्थल पुगेका थिए। भोस्लेले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटघाट गर्ने र रेडियो नेपाल जाने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ। उनले शनिबार संगीतकार […]
बिरगंजमा पनि मनाइयो क्रिसमस क्रिसमसको शुभकामना! मेरि क्रिसमस!….
सुनिल श्रेष्ठ , विरगंज , पुष , ९ , आज भब्यताका साथ इसाई धर्मका अनुयाईहरू साैहार्दता तथा खुशियालीको चाड क्रिसमस मनाउँदैछन् । संभवतः संसारभरि धेरै देशहरुमा एकैदिन अर्थात आजैको दिन चारैतिर सार्वजनिक विदा हुनेगर्दछ । विदेश तिर धेरैजसो ठाँउमा जाडोको सिरेटोले आफ्नो गति बढाइसकेको हुनुपर्छ । हिउँद, हिउँ अनि चिसो सिरेटोबिचको यो पर्व क्रिसमसका धेरै पाटाहरु […]
ट्रेड युनियन कांग्रेसको परिषद भव्य उदघाटन, बन्द सत्र आज
काठमाडौ ,मंसिर ,६, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको राष्ट्रिय परिषद भव्य उदघाटन भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले परिषदको उदघाटन गर्नु हुदै नेकपाको सरकारले संवैधानिक आयोगहरुलाई शाही आयोग बनाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ । हरेक निकायलाई आफु अनुकुल बनाई शाही आयोग बनाउने खोजे पनि त्यो अभिष्ट पुरा हुन नदिने बताउनु भयो । […]
जनैपूर्णीमाको अवसरमा गोसाईस्थानको मेलामा लाखौं श्रद्धालु भक्तजनहरुको घुईचो
साउन / ३० / बनेपा / हरेक वर्षको जस्तै यस वर्ष पनी काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नं. ६ मा रहेको ऐतिहासिक तीर्थस्थल गोसाईस्थानमा हरेक वर्ष जनैपूर्णीमाको अवसरमा लाग्ने यो मेलामा श्रद्धालु भक्तजनहरुको घुईचो लागेको छ । ब्राम्हण समुदायले जनै र डोरो लगाउँछन् भने नेवार समुदायले अन्नपात चढाउने गर्दछन् । त्यसैगरी तामाङ समुदायले विभिन्न स्थानबाट आफ्नो […]
२९ र ३० गतेको तामाङ अन्तराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको तयारी तीव्र, के-के छन् आकर्षणहरु ?
काठमाडौं, २५ जेठ: तामाङ अन्तराष्ट्रिय इण्डिपेन्डेन्ट चलचित्र महोत्सव(टिफ) २०१९–Tamang International Indipendent Film Festival(TIFF) 2019 को तयारीलाई आयोजक समितिले तिव्रता दिएको छ । यहि जेठ २९ र ३० गते राजधानीको प्रदर्शनी मार्ग स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा हुने महोत्सवको तयारी अन्तरगत प्रचारप्रसार,अतिथि निमन्त्रणा, प्रदर्शन गर्ने चलचित्र छनौट लगायतका काम भइरहेको महोत्सव अध्यक्ष विगेन्द्र वाइबा तामाङले जानकारी दिनुभयो । […]
संसारकै सेक्सी ट्याक्सी चालक
४ years अगाडि
एजेन्सी, मनिला । फिलिपिन्सकी जोयस तादिओ लामो समयदेखि मेडिकल प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्थिन् । तर, रात–दिनको दौडले उनलाई साहै् भ्याइनभ्याई भयो । मनोविज्ञानमा स्नातक गरेकी उनले करियर परिवर्तन गर्ने निधो गरिन् । र, विगत ८ महिनादेखि ट्याक्सी चालकका रूपमा काम गर्न थालिन् । पुरुषहरूको बाहुल्य रहेको सवारी उद्योगमा उनको आगमनले यात्रुहरू औधी प्रभावित भए । […]
संसारभरका नेपाली कलाकार एकै ठाउँमा जमघट हुदै
खुम्बु कोल्स्च ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डको दोस्रो संस्करण यहि भदौ ३ मा अमेरिकाको कोलोराडोमा आयोजना हुने भएको छ । यहि भदौमा अमेरिकाको कोलोराडोमा हुन लागेको उक्त ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डको तयारीको लागि अहिले आयोजक सस्था लागि परेको छ भने तयारी पनि तिब्र रुपमा सम्पन्न गर्दै अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २०१६ मा पहिलो पटक अमेरिकामा […]
सबैको समाचार डट कम आज देखि संसारभर
५ years अगाडि
बैशाख २७, काभ्रे । काभ्रे बाट संचालित सबैको समाचार डट कम आज देखि संसार भर अनलाईनमा प्रकाशित भएको छ। रवि धितालको प्रकाशनमा प्रकाशित अनलाइनमा केशब चापागाईको प्रधान सम्पादत्व रहेको छ। उक्त अनलाईनमा सह-प्रकाशक पुजन धिताल र भक्त दाहाल रहेका छन भने सम्पादक सनम सुवाल त्यस्तै सह-सम्पादक अमृत ओझा, त्यस्तै विशेष संबाददातामा किरन थापा र संदिप […]